Imitholampilo yethu nozakwethu - Vondt.net
Imitholampilo yethu kanye nozakwethu
- Umbono wethu? Sihlala Sisebenza Ukuze Sibe Ochwepheshe Abahle Kakhulu Bokunakekelwa Kwezempilo Okugunyaziwe Kwezemisipha, AmaTendon Namajoyinti
I-VondtKlinikkene iyinethiwekhi ekhula njalo yobungcweti yemitholampilo enesifiso sokuhlala inekhono eliphakeme eliyingqayizivele ekuhloleni, ekwelashweni nasekuqeqesheni. Ohlwini olungezansi uzothola imininingwane eminingi ngemitholampilo yethu ehambisana nayo, kanye nabalingani bethu. Umbono wethu ukuthi uzizwe uqiniseka ukuthi uthola ulwazi olungcono kakhulu lwesiguli olunikezwa ochwepheshe bezempilo abagunyazwe esidlangalaleni abanolwazi lobuchwepheshe emisipheni, emisipheni nasemalungeni.
I-Lambertseter: Isikhungo seLambertseter Chiropractor nePhysiotherapy
UCecilie Thoresens vei 17, 1153 Oslo (iLambertseter Senter - Helsehuset)
I-Eidsvoll: Isikhungo se-Eidsvoll Healthy Chiropractor kanye nePhysotherapy
I-Eidsvoll: Isikhungo Se-Råholt Chiropractor kanye nePhysotherapy
IGladbakkvegen 1, 2070 Råholt (AMFI - Helsehuset)
Sawubona, igama lami ngu-Alexander Andorff. I-chiropractor egunyaziwe kanye nodokotela wokuvuselela kabusha we-biomechanical.
Ngingumhleli oyinhloko weVondt.net neVondtklinikkene - futhi ngisebenza kwa Isikhungo seLambertseter Chiropractor nePhysiotherapy. Njengokuxhumana okuyinhloko kwanamuhla kwizinkinga zemisipha, kuyintokozo yangempela ukusiza iziguli zibuyele empilweni engcono yansuku zonke.
Ucwaningo olunzulu kanye nendlela yesimanje yokwelashwa yizimiso ezisemqoka zeMitholampilo Yezinhlungu - kanye nabalingani bethu. Sisebenzisana kakhulu nochwepheshe bezokwelapha namaGP ukwenza imiphumela ibe ngcono. Ngale ndlela, singanikeza abaningi okuhlangenwe nakho okungcono kakhulu futhi okuphephile kwesiguli. Amanani wethu ayisisekelo aqukethe amaphuzu ayi-4 ayinhloko:
Njengoba sinabalandeli abangaphezu kuka-85000 ezinkundleni zokuxhumana, kanye nezivakashi ezisondele ezigidini eziyi-15 ngonyaka (kusukela ngoMashi 2022), akumangazi kwabaningi ukuthi siphendula nsuku zonke emibuzweni emayelana nabelaphi abanconyiwe ezweni lonke uma kunzima ngokwendawo ukuyithola. sifinyelele. Kwesinye isikhathi sithola imibuzo eminingi okungaba nzima ukuyiphendula yonke, yingakho sidale lesi sigaba - lapho sizothatha khona kancane kancane, ngaphezu kwemitholampilo yethu esebenzisana nayo, engeza izincomo zethu ngaphakathi kochwepheshe bezempilo abagunyazwe ngokukhethekile indawo esheshayo.
Isiguli: Bhukha Isikhathi Sokugula Kwakho Kwemisipha Nezihlanganisi?
Uma ufuna ukufunda kabanzi ngemitholampilo noma ukubhuka i-aphoyintimenti, ungachofoza kuzixhumanisi ezingenhla. Ukuqokwa kwenziwa kumawebhusayithi aqondene nemitholampilo. Zizwe ukhululekile ukuxhumana nathi uma unemibuzo noma okunye okunjalo.
I-Physiotherapist noma i-Chiropractor: Sebenza nathi?
Imitholampilo yethu ingakhomba ukubumbana okuhle komphakathi, izinhlu zeziguli ezimatasa, amathuba amahle okuthola imali kanye nenkundla enhle yokufunda. Sihlale sifuna ochwepheshe abanekhono - futhi sivame ukuba namathuba nakuba ngokuvamile singadingi ukuthumela izikhundla ngenxa yabantu abafaka izicelo bengacelwanga. Imitholampilo yezinhlungu igxile ngokukhethekile ku-chiropractic yesimanje kanye ne-physiotherapy, kodwa futhi sinesithakazelo esikhulu ekuzweni ngama-naprapaths, ama-osteopaths nama-masseurs. Ukuze usithinte, sicela ukuthi uthumele umlayezo oqondile komunye wale mitholampilo engenhla. Sibheke ngabomvu ukuzwa kuwe.